ESI TINYE IHE EDOKỌBARA NA YANDEX BROWSER - YANDEX - 2019
Anyị tinye ibe edokọbara na Yandex Browser
PDF faịlụ nwere ike ịnwe ozi ederede nke enwere ike ịfefe ma ọ bụrụ na ị gbanwee faịlụ ahụ niile na ụfọdụ ederede ederede. Isiokwu a ga-akọwa otu esi edepụta ederede site na PDF.
Detuo ederede site na PDF
O kwere omume iji ihe edere ederede ederede site na PDF, yana yana ọrụ nke mbụ - ọrụ na nhazi okwu, pasta n'ime ibe, idezi, wdg. N'okpuru ebe a, anyị ga-atụle ihe ngwọta maka nsogbu a na mmemme abụọ a ma ama maka ịrụ ọrụ na PDF. A ga-atụlekwa ngwa nke ị nwere ike idetu ọbụna ederede ederede ederede!
Usoro 1: Evince
Evince na-enye ikike ịdepụta ederede ọbụna site na akwụkwọ ndị ahụ nke onye edemede dere.
Wụnye Evince site n'ibudata faịlụ nwụnye site na njikọ dị n'elu.
Mepee faịlụ a na-echebe .df na Evins.
Họrọ ederede na aka nri na ya. Na nchịkọta nhọrọ, pịa ihe ahụ. "Detuo".
Ugbu a, ederede ederede dị na windo. Iji fanye ya, pịa igodo nchikota "Ctrl V » ma ọ bụ mepụta menu ihe ndị a site na ịpị bọtịnụ òké aka ahụ, wee họrọ nhọrọ na ya "Tapawa". Ihe nseta ihuenyo dị n'okpuru na-egosi ihe atụ nke ntinye n'ime ibe na Okwu.
Usoro 2: Adobe Acrobat DC
Ngwa ngwa na ngwa ngwa maka edezi na nhazi PDF sitere na ụlọ ọrụ ahụ mepụtara usoro faịlụ a, nke ga-enye gị ohere idetu ederede dị n'ime akwụkwọ ahụ.
Mepee PDF nke ịchọrọ inweta ederede, iji Adobe Acrobat DC.
Họta nọmba chọrọ nke mkpụrụ edemede na bọtịnụ òké aka ekpe.
Wee pịpị na klas ahọrọ ahụ na bọtịnụ òké aka nri. Na ndepụta na-egosi, họrọ "Detuo".
Gaa na paragraf nke anọ nke usoro mbụ.
Usoro 3: Foxit Reader
Onye na-agụ akwụkwọ Foxit Reader ngwa ngwa na kpamkpam ịnagide ọrụ nke ịdegharị ederede site na PDF faịlụ.
Mepee PDF akwụkwọ na Foxit Reader.
Họrọ ederede na bọtịnụ òké aka ekpe ma pịa akara ngosi ahụ. "Detuo".
Na ihe omumu a, atumatu ato iji deputa ederede site na PDF file - were Evince, Adobe Acrobat DC na Foxit Reader. Ihe omume mbụ ahụ na-enye gị ohere ịdepụta ederede echedoro, nke abụọ bụ usoro kachasị ewu ewu maka ịrụ ọrụ na usoro faịlụ a, nke atọ na-enyekwa ikike iji ngwa ngwa dee ederede site na iji teepu na-akpaghị aka na ngwaọrụ.